Wantoota G-2 gara Qonyootti, Rogabaay'ee fi wantoota G-3 tti jijjiiruu
wantoota G-3 gara Qonyootti, rogabaay'eetti fi wantoota G-3tti jijjiiruu
Wanta qonyoowaa qonyoota Bézier irratti hunda'an
Wanta rogbaay'ee muraa sarara qajeelaa of keessaa qaban
Wanta G-3 gaadiddeesuu fi madda ifaa waliini
Wanta naana'oo G-3 gaadiddeesuu fi madda ifaa waliini
Wanta gara wanta qonyoowaatti jijjiiruuf:
Islaayidii ykn fuula irraa wanta G-2 fili.
Wanticha mirga-cuqaasitti Jijjiirii- Gara QOnyootti fili.
Boca wanticha foyyeessuuf, sajoo qaphxiilee kamshaa Fakkasaa irraa cuqaasittii qabbannoo wanta haarkisii. Boca wantichaa foyyeessuuf qaphxii too'annoo qabannoota harkisuu dandeessa.
Wanta G-2 gara rogbaay'ee jijjiiruuf:
wanticha mirga-cuqaasitti jijjiirii- gara rogbaay'eetti.fili
Boca wantichaa foyyeessuuf, sajoo Qaphxiilee kamshaa Fakkasaa irraa cuqaasittii qabbannoo wanta haarkisii. Boca wantichaa foyyeessuuf qaphxii too'annoo qabannoota harkisuu dandeessa.
Wanta G-2 gara wanta G-3 jijjiiruuf:
Sajoo Extrusion Ka'aa/Dhaamaa kamshaa Fakkasaa irraa cuqaasii, ykn wantiicha mirga cuqaasiitii Gara G3 Jijjiiri filadhu.
Amaloota wanta G-3 gulaaluuf kamshaa sararaaf, Qindaa'innoota G-3 fayyadami.
wanta barruu gara wanta G-3 tti jijjiruuf, sajoo Dalagabocquu kamshaa Fakkasaa irraa fayyadami.
Wanta G-2 gara wanta naanna'a G-3 tti jijjiiruuf:
wantii naanna'an G-3 kan uummamuu, wanta filatames siiqqee sarjaa isaatiin marsuudhaan ta's.
Wanticha mirga-cuqaasitti jijjiirii- gara wanta naanna'a G-3 tti jijjiirii fili.
Amaloota wanta G-3 gulaaluuf, kamshaa sararaa fi gutinsaa akkasumasa kamshaa qindaa'innoota fayyadami.
Wanta G-2 boca xaxamaa baay'ee uuuuf, jijjiiruu keettin duratti wanticha G-2 marsuu dandeessa.
Sarara qonyoowwaa fili, kana Qonyoota Gulaaluu
Arfiilee Barruu gara Wantoota Fakkasaatti jijjiru.
Title is: Wantoota G-2 gara Qonyootti, Rogabaay'ee fi wantoota G-3 tti jijjiiruu